iMac 2021 အတွက်ယူရို ၁,၂၉၉၊ AirPods Max ၅၀၉ ယူရိုနှင့် Apple ထုတ်ကုန်များ Amazon တွင်အခြားကမ်းလှမ်းချက်များ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignacio Sala | 20/09/2021 14:00 | အိုင်ပက်, iPhone ကို
နောက်တစ်ပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားအကြောင်းကြားသည် Apple ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူများ Amazon တွင်ရနိုင်သည်။ iPhone 13 အကွာအဝေးမိတ်ဆက်ပွဲရက်နီးလာသည်နှင့်အမျှ Apple သည်ရရှိနိုင်သောစတော့များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းနှင့်မီးမောင်းထိုးပြရန်မည်သည့်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမှမတွေ့ခဲ့ပါ။
Apple နှင့် Amazon တို့အကြားနောက်ဆုံးပေါ် e-commerce platform မှတဆင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချရန်သဘောတူညီမှုကြောင့်၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်လျှော့စျေးများနှင့် Apple ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ပါ အမြဲကဲ့သို့တူညီသောအာမခံချက်နှင့်အတူ၎င်းသည်လက်တွေ့ဘဝဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့လက်လွတ်မခံနိုင်သောကမ်းလှမ်းချက်များကိုတွေ့ရသည်။
Amazon ကငါတို့ကိုခွင့်ပြုတယ် ထုတ်ကုန်အားလုံး ၀ ယ်ယူရန်ငွေကြေး အတိုးမဲ့အတိုးမဲ့အရစ်ကျယူရို ၇၅ မှ ၃၀၀၀ ကြားစျေးနှင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရနိုင်သည်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ချင်းစီတွင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအသေးစိတ်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
1 iMac 2021 အတွက်ယူရို ၁၂၉၉
2 iPad Air 2020 ကို ၅၂၉ ယူရို
3 IPad ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
3.1 ပထမမျိုးဆက် Apple Pencil ကို ၈၉ ယူရိုဖြင့်
3.2 iPad အတွက် Bluetooth mouse သည် ၁၃ ယူရိုဖြစ်သည်
4 Amazon Music HD ကို ၃ လအခမဲ့
5.1 iPhone 12/13 Pro Max အတွက် MagSafe နှင့်လိုက်ဖက်သောသားရေအိတ်အပြည့်ကို ၉၇ ယူရို
5.2 Apple MagSafe Double Charger သည်ယူရို ၁၃၀ ဖြစ်သည်
5.3 ဒုတိယမျိုးဆက် AirPods ကို ၁၃၉ ယူရို
5.4 ၁၆၉ ယူရိုအတွက်ကြိုးမဲ့အားသွင်းဘူးပါသောဒုတိယမျိုးဆက် AirPods
5.5 ၁၈၈ ယူရိုအတွက် AirPods Pro
5.6 AirPods Max ကိုယူရို ၄၉၉
iMac 2021 အတွက်ယူရို ၁၂၉၉
၂၀၂၁ Apple iMac ...
နှစ်ရှည်လများစောင့်မျှော်နေသော iMac ၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုသည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး၎င်းကိုကြီးမားသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ iMac 2021 သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် 24K resolution ရှိသော ၆.၃၃ လက်မမျက်နှာပြင် iPad Pro 1 အကွာအဝေးတွင်ရရှိနိုင်သော Apple ၏ M2021 processor နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
ဤပုံစံသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုးချဲ့နိုင်သောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခု၊ RAM 8 GB၊ သိုလှောင်မှု 256 GB၊ CPU ၈ လုံးနှင့် GPU ၇ လုံးမရ။ အပြာရောင် ၀ တ်စုံ၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာယူရို ၁,၄၄၉ ဖြစ်သည် ၎င်းကို Amazon တွင် ၁,၂၉၉ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်၎င်းသည်ယူရို ၁၅၀ ချွေတာခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
iMac 2021 ကို CPU Core 8 ခုနှင့် GPU Core7ခုဖြင့်ယူရို 1.299 ဖြင့် ၀ ယ်ယူပါ
မော်ဒယ်နှင့်အတူ CPU ၈ လုံးနှင့် GPU ၇ လုံးပုံမှန်အားဖြင့် ၁,၆၆၉ ယူရိုရှိသည် ၎င်းကို Amazon တွင်ယူရို ၃၄.၉၉ သို့လျှော့ချသည် RAM ပမာဏနှင့် hard drive သိုလှောင်မှုပမာဏတူညီသည်။
iMac 2021 ကို CPU Core 8 ခုနှင့် GPU Core 8 ခုဖြင့်ယူရို 1.399 ဖြင့် ၀ ယ်ယူပါ
iPad Air 2020 ကို ၅၂၉ ယူရို
၂၀၂၀ Apple iPad Air
iPad သို့မဟုတ် iPad mini မျိုးဆက်သစ်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါက၊ သင် Pro range ကိုကျော်ဖြတ်လျှင်ယနေ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ iPad Air ဖြစ်သည်။ ၁၀.၉ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် 2020GB သိုလှောင်မှုပါသော ၂၀၂၀ iPad Air ကို Amazon တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် 529 ယူရိုကနေ၎င်းသည်၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းတွင် ၁၈% လျှော့စျေးကိုကိုယ်စားပြုသည်။
iPad Air 2020 တွင် A14 Bionic ပရိုဆက်ဆာကိုတွေ့သည်၊ လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာသည် home ခလုတ်၏အပေါ်ဆုံးတွင်ရှိသည်၊ ၎င်းသည်ဒုတိယမျိုးဆက် Apple Pencil နှင့်လိုက်ဖက်ပြီး Apple Store တွင် ၆၄၉ ယူရိုရှိသည်။
ပန်းရောင် iPad Air သိုလှောင်မှု 64 GB နှင့် ၅၂၉ ယူရို Silver iPad Air ၏သိုလှောင်မှု 64 GB နှင့်ယူရို ၆၂၆ ဖြစ်သည်။ Sky blue iPad Air သိုလှောင်မှု 64 GB နှင့် ၆၁၁ ယူရို
ပထမမျိုးဆက် Apple Pencil ကို ၈၉ ယူရိုဖြင့်
ပန်းသီးခဲတံ (ဒုတိယ ...
မင်းက iPad Pencil ကငါတို့ကို iPad Air ကပေးတဲ့ဘက်စုံသုံးနိုင်စွမ်းကိုရချင်ရင်အဲဒါကိုမင်းရနိုင်တယ်။ 126 ယူရိုသည်မရ။ Apple Store တွင်၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းသည် ၁၃၅ ယူရိုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သိသိသာသာလျှော့စျေးမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်နိုင်သောယူရိုအနည်းငယ်သည်အလွန်အကျွံဘယ်တော့မှမရပေ။
ပထမမျိုးဆက် Apple Pencil ကို ၈၉ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်ယူပါ။
iPad အတွက် Bluetooth mouse သည် ၁၃ ယူရိုဖြစ်သည်
ဘက်ထရီနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ bluetooth mouse အတွက်ပိုက်ဆံအများကြီးမသုံးချင်ရင် Amazon မှာ INPHIC mouse, mouse တစ်ခုရှိတယ်။ စျေးကတော့ ၁၅၉ ယူရိုရှိပါတယ်၎င်းသည် bluetooth နှင့်အလုပ်လုပ်ပြီး USB သို့ချိတ်ဆက်ရန်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းကိုကွန်ပျူတာတွင်သုံးနိုင်သည်။
bluetooth mouse ကို ၁၂.၉၉ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်ပါ။
Amazon Music HD ကို ၃ လအခမဲ့
နိုဝင်ဘာလအစတွင်ငါတို့သည် Amazon Music HD ကိုလုံးဝအခမဲ့ခံစားရန်သုံးစွဲသူများအားရရှိနိုင်သောပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းအသိပေးသည်။ Apple ၏ streaming ဂီတပလက်ဖောင်းသည်အဓိပ္ပါယ်မြင့်မားသည်။
ဒီကမ်းလှမ်းချက်သာရရှိနိုင်ပါသည် စက်တင်ဘာ ၂ ရက်အထိ ယခင်အလားတူအရောင်းမြှင့်တင်မှုများသင်မခံစားသရွေ့ ၃ လကြာပြီးနောက်စျေးနှုန်းသည် ၉.၉၉ ယူရိုဖြစ်ပြီး Apple Music နှင့်တူညီသည်။ သင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စာချုပ်လိုလျှင် ငွေပေးချေမှုမစတင်မီမှာယူမှုရပ်ဆိုင်းပါဒါကိုသင်လုပ်နိုင်တယ် ဒီ link ကို.
iPhone 12/13 Pro Max အတွက် MagSafe နှင့်လိုက်ဖက်သောသားရေအိတ်အပြည့်ကို ၉၇ ယူရို
Apple ပေါင်းစည်းမှု ...
သင်သည်သင်၏ iPhone ကိုကျောကိုကာကွယ်ရန်သာငြီးငွေ့ပြီး၎င်းအားစွန့်ပစ်ရန်အန္တာရယ်မရှိဘဲ Apple အသုံးပြုသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက Apple သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသားရေအိတ်စွပ်ပေးသည်။ ခြေအိတ်ကဲ့သို့အဖုံး (ငါတို့အချင်းချင်းနားလည်နိုင်အောင်) iPhone 12/13 Pro Max ကိုလုံခြုံမှုနှင့်အကာအကွယ်အပြည့်ဖြင့်သယ်ဆောင်ခွင့်ပြုသည်။
Es MgSafe နည်းပညာနှင့်လိုက်ဖက်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းအားအားသွင်းရန်ကိစ္စမှကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်အကြွေးဝယ်ကတ်၊ သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းနဲ့လက်ထဲမှာပါတဲ့သိုင်းကြိုးတစ်ချောင်းကိုထည့်ဖို့အိတ်အတွင်းပိုင်းအိတ်သေးသေးလေးတစ်လုံးကိုထည့်ပါ။ အရှေ့ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အချိန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သူခေါ်နေသည်ကိုကြည့်ရန်နေရာရှိသည်။
သားရေအိတ်၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းသည် ၁၄၉ ယူရိုဖြစ်သည်ဒါပေမယ့်ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် သူမကို Amazon တွင် ၉၇ ယူရို.
iPhone 12/13 Pro Max အတွက်သားရေအိတ်အပြည့်ဝယ်ပါ။
ဤအဖုံးကိုအရောင်အတွက်ခရမ်းရောင်နှင့်လည်းရနိုင်သည် iPhone 12 နှင့် iPhone 12 Pro အတွက် ၉၂ ယူရို.
သားရေအပြည့် iPhone 12 နှင့် iPhone 12 Pro case ကို ၀ ယ်ပါ။
Apple MagSafe Double Charger သည်ယူရို ၁၃၀ ဖြစ်သည်
Apple က Dual Charger ...
သင်က Apple Watch နှင့် iPhone 12 အတွက်ခရီးဆောင်အားသွင်းစက်ကိုရှာဖွေနေပါက Apple ကကျွန်ုပ်တို့အားဖြေရှင်းပေးသောအဖြေမှာ Double MagSafe အားသွင်းစက်ဖြစ်ပြီး၎င်းနေရာလွတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်သယ်ယူရန်လွယ်ကူစေသောအားသွင်းစက်ဖြစ်သည်။ ပါဝါ adapter မပါ ၀ င်သောဤအားသွင်းကြိုး၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းသည် ၁၄၉ ယူရိုဖြစ်သော်လည်း Amazon ၌ကျွန်ုပ်တို့ရနိုင်သည် သာ 130 ယူရိုသည်.
Apple MagSafe Double Charger ကိုယူရို ၁၃၀ ဖြင့် ၀ ယ်ပါ။
ဒုတိယမျိုးဆက် AirPods ကို ၁၃၉ ယူရို
AirPods သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသော Apple ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် amazon တွင်ငွေအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးမရ။ နောက်ထပ်တစ်ပတ်၊ ဒုတိယမျိုးဆက် AirPods ကိုလျှပ်စီးကြိုးနဲ့အားသွင်းတဲ့အဖုံးပါတာကိုငါတို့တွေ့နိုင်ပါတယ် အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း: ၁၀၅ ယူရိုမရ။ ဤနားကြပ်များ၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းသည် ၁၇၉ ယူရိုဖြစ်သည်။
ဒုတိယမျိုးဆက် AirPods ကိုမိုးကြိုးပစ်အိတ်ဖြင့် ၁၀၅ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်ပါ။
၁၆၉ ယူရိုအတွက်ကြိုးမဲ့အားသွင်းဘူးပါသောဒုတိယမျိုးဆက် AirPods
ကြိုးမဲ့အားသွင်းအဖုံးပါသောဒုတိယမျိုးဆက် AirPods Amazon တွင်သူတို့၏အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီ ပြီးတော့သူတို့ကိုကိုင်ထားလို့ရတယ် သာ 169 ယူရိုသည်မရ။ Apple Store တွင်၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းသည် ၁၄၉ ယူရိုဖြစ်သည်။
ဒုတိယမျိုးဆက် AirPods ကိုကြိုးမဲ့အိတ်နှင့်ယူရို ၁၆၉ ဖြင့် ၀ ယ်ယူပါ။
သူတို့ရဲ့ညီငယ်တွေလိုပဲ AirPods Pro ကိုလည်း Amazon မှာ ၃၇% ပုံမှန်ဈေး ၃၇% လျှော့စျေးနဲ့ Amazon မှာရနိုင်ပါတယ်။ သာ 175 ယူရိုသည်Apple AirPods Pro ကို Apple Store တွင်ပုံမှန်ထက် ၁၀၄ ယူရိုသက်သာသည်။
AirPods Pro ကိုယူရို ၁၉၀.၉၀ ဖြင့် ၀ ယ်ယူပါ
AirPods Max ကိုယူရို ၄၉၉
Apple AirPods MAX အသစ် ...
Apple ၏ AirPods Max ကို Amazon တွင်ပုံမှန်အားဖြင့် ၆၂၉ ယူရိုဖြင့် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Amazon တွင်ရနိုင်သည်၊ အရောင်အားလုံးအတွက် ၅၀၉ ယူရို
ထိုသို့မှန်ပေမယ့် ၎င်းသည်၎င်း၏သမိုင်းအနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းမဟုတ်ပါလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က ၄၉၉ ယူရိုဖြစ်သည့်လျှော့စျေးသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးသင်လက်မလွတ်နိုင်သည့်ယခင်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုနှင့်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
AirPods Max ကိုမည်သည့်အရောင်ဖြင့်မဆို ၅၀၉ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » iMac 2021 အတွက်ယူရို ၁၂၉၉၊ AirPods Max ၅၀၉ ယူရိုနှင့် Apple ထုတ်ကုန်များ Amazon တွင်အခြားကမ်းလှမ်းချက်များ